Ụbọchị My Pet » Ise Atụmatụ na otú Bịakwute A kpuru ìsì Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: Sep. 19 2020 | 2 min agụ
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ a na-akụda ahụmahụ. Kpuru ìsì mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịhapụ gị n'ọchịchịrị na a na-akụda ahụmahụ. Ma, e nwere dịghị mkpa ka na-ezere ìsì ụbọchị ahụmahụ. I maghi onye ị pụrụ izute.
Tụkwasịrị Obi iyi - Ònye na-gị ìsì ụbọchị nwere ike ịbụ isi ihe na-anya. Ọ bụrụ na enyi gị nke aro ụbọchị, na-eche banyere ebe a na enyi nwere ike na-abịa site. Jụọ mere ha chọrọ ka ị na-na ihe ụdị a njikọ ha na-eche na ị ga-eso gị na ụbọchị. Nke a pụrụ ịbụ ihe bara uru ihe ọmụma nwere mgbe nzuko onye ọhụrụ na nke mbụ.
Ukporo ọnọdụ - a mma na ọnọdụ nwere ike ime ka a ìsì ụbọchị mfe. Họrọ ebe nkịtị na fun ebe ị ma mara ihe na-atụ anya. Ukporo n'ebe ndị dị ka Americe II na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-magburu onwe ya n'ihi a ìsì ụbọchị. E nwere obere okwu nhọrọ dị ka inwe ihe ọṅụṅụ ọnụ ma ọ bụrụ na niile na-aga nke ọma, ụbọchị nwere ike ịgbatị n'ime a aba nri abalị ụbọchị. Ọzọkwa, fun nhọrọ ukwuu. Ihe ndị dị otú ahụ dị ka Obere golf ma ọ bụ Bowling nwere ike ịbụ na na na flirty enweghị ịdabere na ukwuu otu na otu mkparịta ụka. Unu na-ahọrọ nkịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ebe dị ka ụlọ ihe nkiri dị ka ị na-agaghị enweta a ohere ịmụta ihe ọ bụla banyere onye ọ bụla ọzọ.
Ejiji kwesịrị ekwesị - Ladies ga-achọ anya nkecha na-enweghị ihe nile si na show. Ihe nkịtị na ala ọma groomed. Ndị mmadụ ga-achọ ukporo ma ka nkecha. Emela mmeghe nke yi ihe na ị bụghị ala dị ka nke a ga-egosi site na gị na ọnọdụ na ụbọchị
-Ekwurịta Okwu obi ike – Bụrụ onwe gị na ngosi ndị kasị mma nke ihe na-eme ka ị pụrụ iche. Ma echefula ịjụ nza ajụjụ banyere gị ụbọchị, enwe mmasị ná ndụ ha na ike ụfọdụ nti njikọ. Ọ bụrụ na ị zutere site datemypet.com, na-egosi ndị kasị mma nke gị Pita enyi dị ka a nkịtị mmasị i nwere ike. Mata gị ọdịmma na ntụrụndụ na-ahapụ ihe ọ bụla mmekọrịta akụkọ ihe mere eme na mkparịta ụka n'ọnụ ụzọ.
Nwere a nchekwube - Jide n'aka na gị ọchị onwe ìsì ụbọchị. Nwee obi ụtọ na ị na-na-ohere izute onye ọhụrụ na dị nnọọ na-aga na eruba. Ihe bụ isi na ya na-akwa ụbọchị bụ-enwe obi ụtọ na loveable, ya mere onwe gị na-enweta gị ìsì ụbọchị.